Tallaalada xeryaha qaxootiga: xaaladda taagan, dalabaadka iyo macluumaadka – Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V.
Macluumaadka laga soo ururiyey Golaha Qaxootiga ee Saxony-Anhalt
Sida laga soo xigtay CoronaImpfV, dadka la dejiyo ama ka shaqeeya hoyga wadajirka ah iyo xarumaha soo dhaweynta bilowga ah waxay ka tirsan yihiin kooxda mudnaanta 2.
Aragti ahaan, waa laga tallaali karaa coronavirus ilaa dhammaadkii Febraayo.
Duruufaha nololeed ee cidhiidhiga ah awgood, waxay u nugul yihiin halista sii kordheysa ee qandaraaska Covid-19 ama xitaa dhimasho, sida ku cad natiijooyinka Shabakada Kartida Cilmiga Caafimaadka Bulshada COVID-19 qaab adag. Xaaladda khaaska ah ee kooxdan dadka ahi waxay tahay inaysan haysan xorriyad ay ku doortaan halka ay ku nool yihiin. Waxaa lagugu qasbay inaad la degto meel cidlo ah oo aad la deggan tahay dad kale oo badan, badiyaa iyada oo aanad haysan wax kale oo lagu beddelo.
Dadaallo ballaaran ayaa laga wadaa dalka oo dhan si loogu tallaalo dad badan intii suurtagal ah. Weydiinta golaha qaxootiga ee gobolka iyo degmooyinka iyo degmooyinka magaalooyinka ayaa muujineysa in tiro aad u yar ay bilaabeen inay ku tallaalaan dadka degan guryaha la wadaago.
Xarumaha soo dhaweynta ee wadanka
Sida ku cad macluumaadka shaqaalaha faafa (laga bilaabo 04/26/21) tallaalka Johnson & amp; Adeegso Johnson. Shixnad ballaadhan oo tallaalkan ah ayaa la filayaa maalmaha soo socda, si tallaalku dhakhso u bilaabo.
Tallaallada waa inay ku fuliyaan goobta kooxaha tallaalka wareega.
Caddaynta waa inay bixiyaan kooxda caafimaadka, taageerada bulshada iyo dhexdhexaadiyeyaasha luqadda. Waraaqaha macluumaadka tallaalka ee luqadaha badan ayaa loo adeegsadaa.
Waxaa la sheegay inuu yahay tallaalka ka yimid Johnson & amp; Johnson maxaa yeelay waxay ubaahantahay oo kaliya in latalaalo halmar sidaas darteedna waa wax fudud si macquul ah hadii dadka loo qaybiyo bulshada talaalka hore kadib. Si kastaba ha noqotee, tallaalkani sidoo kale waa midka ugu waxtarka yar iyo, sida laga soo xigtay waayo-aragnimada gobollada kale ee federaalka, shakiga horeyba u qabay ee kuwa ay saameeyeen ayaa mar kale kordhay.
Gobollada kale ee federaalka ah, sida Schleswig-Holstein ama Lower Saxony, tallaallada tallaallada kale ayaa durba la bilaabay – Schleswig-Holstein wuxuu ku tallaalaayay tallaalka Biontech ilaa dhammaadkii Maarso.
Guryaha la wadaago ee wadaagga ah (GU) ee degmooyinka miyiga ah iyo degmooyinka magaalooyinka
Dhammaan degmooyinka / degmooyinka magaalooyinka la weyddiiyey kama jawaabin. Waxaan haynaa jawaabaha soo socda (laga bilaabo 04/19/19/21)
degmadu ma laha hoy wadaag ah
Börde (laga bilaabo Abriil 9keedii):
Macluumaadka tallaalka ee dadka deegaanka iyo shaqaalaha ayaa horeyba uga dhacay luuqado kala duwan
Kooxaha talaalka wareega ayaa horeyba uga talaalay dhamaan dadka doonaya inay ku talaalaan goobaha
Sharaxaad, talo iyo iskuduwid ayaa ka dhacay luuqado kala duwan qeyb ahaanna qoraal ahaan shaqaalaha bulshada
Magdeburg (laga bilaabo Abriil 12keedii):
shaqaaluhu qayb ahaan waa la tallaalaa
Qorshuhu waa in la isticmaalo koox guurguura.
ma laha hoy wadaag ah
Stendal (laga bilaabo Abriil 12keedii):
Ma jiraan wax talaal ah oo laga helayo kooxda mudnaanta leh wali.
Weli ma cadda in tallaalka lagu qaadanayo iyadoo la adeegsanayo kooxaha tallaalka, xarunta tallaalka ee Stendal ama dhakhtarka qoyska.
Deganayaasha GU waxaa wargaliya shaqaalaha bulshada. Fiidiyowga tilmaamidda tallaalka iyo dukumintiyada macluumaadka ee Wasaaradda Caafimaadka ee Dowladda Federaalka ayaa loo adeegsadaa dhowr luqadood.
Taageero ayaa la bixiyaa sida ay u baahan yihiin shaqaalaha bulshada ee GU.
Altmarkkreis Salzwedel (laga bilaabo Abriil 13th):
Majiraan wax talaal ah oo kujira kooxda mudnaanta 2 wali
Looma adeegsan kooxaha talaalka mobilada oo la qorsheeyay (marka laga reebo dadka guurguura ee kooban ee GUs)
Shaqaalaha waa in marka hore la tallaalaa
Tallaalka dadka deggan ballanta tallaalka ee bartamaha magaalada
Ballanta tallaalka waxaa lagu sameeyaa bartamaha iyada oo loo marayo marinka Ururka Dhakhaatiirta Caymiska Caafimaadka ee Sharciga ah
Macluumaadka kaliya af Jarmal iyadoo la tixraacayo websaydhka RKI ee loogu talagalay macluumaadka luqadaha badan leh
Ma jiraan adeegyo taageero oo dheeri ah oo suurtagal ah, talo waa in la bixiyaa oo keliya marka ballanta tallaalka la soo ururiyo (“macluumaadka la isku geeyay”)
Wittenberg (laga bilaabo Abriil 14-keedii):
Tallaalada waxaa la abaabulay ilaa Abriil
Shaqaalaha hadda waxaa lagu tallaalayaa xarunta tallaalka, dadka deegaanka waxaa laga filayaa in laga tallaalo bisha Maajo koox tallaal guurguura oo ka tirsan GUs ee goobta joogta.
Bixinta macluumaadka shaqaalaha bulshada, ururada iyo dadaallada ayaa kugu taageeraya inaad ballansato ballamaha tallaalka
Adeegsiga adeegga tarjumaadda fiidiyowga ee khadka tooska ah (oo ay ku jiraan luqadda calaamadaha)
Kharashyada safarka ee xarunta talaalka lama daboolayo
Gunaanad iyo dalabyo
Kahortaga ugu fiican ee infekshinka waa hargab baahsan oo wali sii jira.
Ilaa iyo inta dalka, degmooyinka miyiga ah iyo degmooyin magaalooyinka ah ay dadka ku dejinayaan hoy weyn – taas oo aan macquul aheyn in laga fogaado fogaantaada – waa inay sidoo kale hubiyaan inay heleen talaalka ay xaqa u leeyihiin sida ugu dhakhsaha badan
Sidoo kale waa in la hubiyaa in dadku ay si haboon isu difaaci karaan, tusaale ahaan iyagoo si joogto ah u bixiya wajiyadda FFP2 oo lacag la’aan ah. Daaweynta kaladuwan marka loo eego kooxaha kale ee dadka mudnaanta koowaad leh koox 2 waa sharci daro, masuuliyad daro iyo bini’aadanimada ka baxsan.
Khibrada laga soo qaatay gobolada kale ee federaalka waxay muujineysaa in hubanti la’aan weyn ay ka dhex jirto qaxootiga taasna ay horseedi karto in la yareeyo rabitaanka talaalka. Si looga hortago hubin la’aanta salka ku haysa xaaladda macluumaadka madmadowga leh, waxaa lagama maarmaan ah in qaxootiga ay saameysay la siiyo marin-hoose, macluumaad luuqado badan leh (oo ay ku jiraan dhibaatooyinka soo raaca) ee tallaallada. Intaas waxaa sii dheer, meelaha aad ka jawaabi karto su’aalaha waa in lala socodsiiyaa. Macluumaadka macluumaadka Robert -Koch-Institut , oo badanaa la tixraaco, way adagtahay in la fahmo oo way adkaan kartaa in dad badani fahmaan.
Maamulada awooda u leh waa inay hubiyaan in qaxootiga ay heli karaan macluumaad si fudud loo fahmi karo, macluumaad luuqado badan leh oo loo fududeeyey dadka siyaabo kala duwan, oo ay ku jirto caawinta dhexdhexaadinta luqadda iyo kuwa aaminka ah. Tani waa sida kaliya ee lagu dhisi karo kalsoonida talaalada lana kordhiyo rabitaanka talaalka. Bixinta macluumaadku waa inaysan sinaba u noqon masuuliyada shaqaalaha bulshada ee hoyga.
Waxaan ku soo uruurinay macluumaad luqado badan ku yaal websaydhkeena.
Iyadoo la ilaalinayo mowduuca, majaladda maalinlaha ah ee ARD 22-kii Abriil. Warbixin: Qaxootiga ay dhibaatadu ka soo gaarto talaalada
Posted in Wararka, Gelitaan & hoy, Corona | Covid-19, Corona | Covid-19, Xaaladda bani'aadamnimada
← Macluumaadka ku saabsan coronavirus iyo talaalada corona (luuqado badan)